Hangman 2.5.8 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.5.8 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
ဂိမ္းမ်ား ပေဟဠိ Hangman
Hangman ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
သင့်မိုဘိုင်းသို့မဟုတ် tablet ပေါ်မှာ hangman ဂိမ်း ပျော်ရွှင်ခံစားပါ! ဤသည်ဂန္ဂိမ်းအထူးသဖြင့်သူတို့ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ဝေါဟာရသို့မဟုတ်စကားလုံးအသစ်သင်ယူခြင်းလေးတွေလေ့ကျင့်ချင်သောသူတို့အားလူကြီးများအဘို့, အားလုံးအသက်အရွယ်အဘို့သင့်လျော်သည်လည်ဆွဲချတိုင်။ သင့်ရဲ့ device ကိုများအတွက်ဂန္ hangman ။
Hangman သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်စကားလုံးရေးရန်နှင့်သင့်မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုနှင့်အတူဆော့ကစားနိုင်မည့်2ကစားသမား mode ကိုလူတို့နှင့်လည်းလာပါတယ်။ စကားလုံးတစ်လုံးရွေးချယ်ပြီးန့်အသတ်သောစကားနှင့်ဂိမ်းပျော်မွေ့။ သူတို့ကအရိပ်အမြွက်သုံးပြီးကခန့်မှန်းရပါလိမ့်မယ်။ တကယ်ပဲပျော်စရာ mode ကို!
အဆိုပါဦးဆောင်ပေါ်တွင်သင်၏အများဆုံးရမှတ် Check နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများမှသင်၏မိတ်ဆွေများသို့မဟုတ်ကစားသမားရန်သင့်စံချိန်နှိုင်းယှဉ်။
ထို့အပြင် "ဆွဲထား" အဖြစ်လူသိများအဆိုပါ hangman သင်အထဲတွင်ထည့်သွင်းစေခြင်းငှါထင်သောစာလုံးများကိုရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်စကားလုံးတစ်လုံးခန့်မှန်းရန်ရှိသည်တံ့သောတစ်ဦးဂန္ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ hangman ဂိမ်းကိုသင်ဝှက်ထားသောအရာစကားလုံးခန့်မှန်းဖို့ကြိုးစားမှရအက္ခရာနှင့်ဗျည်းကိုရှေးခယျြဖို့ option ကိုငါပေးမည်။ သငျသညျစေတစ်ခုချင်းစီကိုအမှားအဘို့, တစ်ချောင်းကိုယောက်ျား၏ပုံကိုဖွဲ့စည်းခဲ့လိမ့်မည်: ပထမဦးဆုံးလည်ဆွဲချတိုင်, ထို့နောက်ဦးခေါင်း, ခန္ဓာကိုယ်နဲ့, နောက်ဆုံးတော့လက်နက်နှင့်ခြေထောက်များ။ အဆိုပါလည်ဆွဲချတိုင်ပြီးပြည့်စုံပင်ဖြစ်သည်ရှေ့တော်၌ထိုစကားလုံးပုံပါဘဲ။
တုတ်ယောက်ျား၏ပုံပြီးစီးမီသင်မှန်ကန်တဲ့စကားလုံးရေးမှတ်နိုင်လျှင်သင်က hangman ဂိမ်းအနိုင်ရပါလိမ့်မယ်။ မဟုတ်ပါကဆွဲထားမည်ဖြစ်ပြီးဂိမ်းအပြီးသတ်ပါလိမ့်မည်။
အရိပ်အမြွက်: လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုအက္ခရာ (က, အီး, ဈ, o, u ... စသည်တို့) ကိုခန့်မှန်းဖို့ပိုပြီးအခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်ကတည်းကပထမဦးဆုံးရအက္ခရာကိုအသုံးပြုပါ။
- အားလုံးအသက်အရွယ်သည်။ လူကြီးများနှင့်အကြီးတန်းကစားသမားများအတွက်စံပြ hangman
- အသံ enable သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားပစ်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေ။
- ထို 2-player ကို mode ကိုမှမိတ်ဆွေများကသို့မဟုတ်မိသားစုကျေးဇူးတင်စကားနှင့်အတူ Play
အဆိုပါ hangman ကမ္ဘာတဝှမ်းကစားသမားများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားများဖြင့်မရရှိနိုင်ပါသည်: စပိန် ahorcado, အင်္ဂလိပ် hangman, ပျေါတူဂီ jogo da forca, ပြင်သစ် le pendu, အီတလီ L'impiccato နှင့်များစွာသောပိုပြီး!
Hangman အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Hangman အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Hangman အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Hangman အား အခ်က္ျပပါ
mercadoapps စတိုး 8 21.88k
Hangman ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Hangman အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 2.5.8
ထုတ်လုပ်သူ Senior Games
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://tellmewow.com/legals
လက်မှတ် SHA1: A4:87:12:21:10:7C:91:05:B7:60:CB:BC:2A:E6:EE:B5:E1:07:A9:74
Hangman APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ